Umaka: ithebhulethi | Martech Zone
Akuvamile kakhulu ukuthi ngibhale nge-hardware, kepha ngonyaka odlule ukuhlanganisa i-Dell Luminaries podcast kuvule amehlo ami ngqo ekuthintekeni kwehadiwe ekukhiqizeni, ekusebenzeni kahle, nasekuqambeni izinto ezintsha. Ngenkathi sihlala singena futhi singena kwisoftware nsuku zonke - ihadiwe esefu nasetafuleni lethu liguqula izinhlangano zethu futhi. Ngokukhula kwamandla okusebenza akude, ukusebenzisana okukude kuya kuba yisidingo -
Kufanele uqale nini ukukhushulwa ngamaholide? Ingabe uhlela imikhankaso yedili online? Ngabe ulungiselela isiza sakho ukuze abathengi be-inthanethi bathole kalula imibono yezipho? Wenzani ukuheha abathengi abakhombisa ukuthi bazothenga khona lapho? Ingabe unemininingwane eyanele yomkhiqizo etholakala kusayithi lakho? Ingabe igumbi lakho lokubonisa eliku-inthanethi livumelanisiwe nokunikezwa kwakho kwangempela kwesitoko? Ingabe isipiliyoni sakho esiku-intanethi nesethebhulethi sikujabulisa?
NgeSonto, Agasti 24, 2014 NgoMgqibelo, ngoMashi 5, 2016 Douglas Karr
Abantu abangama-57% abayincomi inkampani yakho ngoba unewebhusayithi yeselula engenziwanga kahle. Lokho kubuhlungu… futhi siyazi Martech Zone ungomunye wabo! Ngenkathi sinohlelo lokusebenza lweselula olumnandi, siyazi ukuthi itimu ejwayelekile yeselula yeJetpack kubuhlungu ukubuka indawo yethu. Njengoba siqhubeka nokusebenza namakhasimende ethu futhi sibuyekeza ama-analytics awo, kuyacaca kithi ukuthi amaklayenti ethu angalungiselelwe
Sisanda kuba ne-webinar kwisayensi yokuxoxa izindaba nabangane bethu eCantaloupe.tv. Akukusha ekuthengiseni nasekukhangiseni, kepha ngasizathu simbe, ukuxoxa izindaba sekuqale ukuqaphela eminyakeni yamuva nje. Abathengi nabathengi bebhizinisi bahlale beguquka kube lula uma kukhona ukubophezeleka okungokomzwelo phakathi kwabo nemikhiqizo abayithandayo… kodwa kuyathakazelisa ukuthi imidiya emidala, ebhaliwe futhi esabekayo iyaqhubeka yini ukusikhathaza kuthelevishini nakuwebhu.
NgoLwesithathu, Februwari 5, 2014 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 4, i-2014 Douglas Karr
Noma nini lapho umkhangisi omusha ebhalisa kusayithi lethu futhi benesikhulumi sokumaketha, sivame ukuthatha ukungena ngokujulile bese senza okuthunyelwe kwebhulogi mayelana nabo. ISocialBungy isanda kubhalisela ukukhangisa ngakho-ke siyabahlola futhi sifuna ukuwabelana nawe. ISocialBungy iyithuluzi lokumaketha nokuhola lokuthwebula le-iPad (noma enye ithebhulethi ne-PC) esetshenziselwa ukuqhudelana, imincintiswano, namafomu wokubhalisa. Ilungele ukukhushulwa okusesitolo,